Pro ကဲ့သို့ Forex Trading ကိုလေ့လာပါ - မေလ 2022 အပြည့်အစုံလမ်းညွှန်။ ကုန်သွယ်မှုလေ့လာပါ။
ကုန်သွယ်ရန် Forex ကို ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်လေ့လာပါ - Beginners Full Guide!
၎င်းသည်လက်လီဖောက်သည်များအတွက်ဖြစ်ရပ်အသစ်တစ်ခုဖြစ်သော်လည်းလွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းအွန်လိုင်း Forex trading သည်တဖြည်းဖြည်းလူကြိုက်များလာသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်သင်၏ကုန်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုကိုလေ့လာရန်သင်၏လက်ချောင်းထိပ်တွင်ပွဲစားများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများစွာရှိသည်။
မည်သည့်ပွဲစားကိုသင်ရွေးချယ်မည်ကိုဆုံးဖြတ်ခြင်းမပြုမီထိပ်ဆုံးမှအောက်သို့ Forex trading ကိုသင်လေ့လာရန်လိုအပ်သည်။
ဤအရာကိုစိတ်ထဲထားပြီးကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် forex ၏လမ်းညွှန်ကိုအတူတကွထားရှိပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်သင်ရောင်းဝယ်ဖောက်နိုင်သည့်ငွေကြေးအမျိုးအစားများ၊ အခွင့်အလမ်းများ၊ စျေးကွက်အမိန့်များ၊ စွန့်စားမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာကိရိယာများနှင့်အခြားအရာများပါဝင်သည်။
Forex Trading ကိုလေ့လာပါ
တစ်နေ့လျှင်ပျမ်းမျှဒေါ်လာ ၅ ထရီလီယံကျော်လည်ပတ်မှုကြောင့် Forex သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးဆုံးဘဏ္marketာရေးဈေးကွက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိငွေကြေးအားလုံးအတွက်စျေးကွက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ငွေလဲလှယ်နှုန်းကိုစတော့အိတ်ချိန်းတွင်ရောင်းဝယ်သောစတော့များကဲ့သို့ပင် Forex စျေးကွက်များ၌ရောင်းဝယ်လိမ့်မည်။
နှစ်ခုပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းနှစ်ခုအကြားအနည်းငယ်ကွာခြားချက်တစ်ခုမှာ forex trading အစည်းအဝေးများအတွင်း၊ ငွေကြေးများကိုကောင်တာကျော်တွင်ရောင်းဝယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ငွေကြေးများကို အဓိက Forex session လေးခုအတွင်း ရောင်းဝယ်ကြသည်၊ လန်ဒန်အစည်းအဝေး၊ နယူးယောက်အစည်းအဝေး၊ တိုကျိုအစည်းအဝေးနှင့် ဆစ်ဒနီအစည်းအဝေး။
အထူးသဖြင့် London နှင့် New York sessions များ (များသောအားဖြင့် တစ်နေ့လျှင် နာရီအနည်းငယ်ကြာသည်) ထပ်နေသောအခါတွင်၊ forex trading ၏ များပြားလှသော အမြောက်အများကို ဤ session နှစ်ခုအတွင်း လုပ်ဆောင်လေ့ရှိပါသည်။ လန်ဒန်နှင့်နယူးယော့ခ်ထပ်နေသည့်ကာလအတွင်း အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်သည့်အခါတွင် ငွေလွှဲခနှုန်းထားများသည် အများအားဖြင့် နည်းပါးသွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ စျေးကွက်သည် အရည်အများဆုံးဖြစ်မည့်အချိန်ဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
ငွေကြေးတန်ဖိုးအပြောင်းအလဲလုပ်နိူင်သည့်အနိမ့်ဆုံးတိုးတက်မှုကို 'pip' ဟုခေါ်သည်။ Forex စျေးကွက်လဲလှယ်နှုန်းကိုယေဘုယျအားဖြင့် ၄ ဒdecimalမကိန်းဖြင့်ဖော်ပြပြီးနောက်ဆုံးဒdecimalမမှာ 'pip' ဖြစ်သည်။ ဤနည်းဥပဒေ၏အဓိကချွင်းချက်မှာအတွဲများကိုဂျပန်ယန်းတွင်တန်ဖိုးသတ်မှတ်သည်။
Forex ငွေကြေး Pairs
အတွဲများဖြင့် ဖော်ပြထားသော ငွေကြေးအားလုံးကို အဓိကအမျိုးအစားသုံးမျိုးဖြင့် အလွယ်တကူ ခွဲခြားနိုင်သည်-
အဓိကတာ ၀ န်များ: ဒီမှာအများဆုံးအရည်တစ်မျိုးဖြစ်ကောင်း EUR / USD ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကငွေကြေးအတွဲများသည်အဓိကအားဖြင့် USD ကို (ကမ္ဘာ့အရံငွေကြေးဖြစ်သော) အမေရိကန်ဒေါ်လာနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ကြလိမ့်မည်။ အခြားစွမ်း၏ဥပမာတစ်ခုပါဝင်သည်; GBP / USD နှင့် USD / JPY ။
အသေးစားпарများ: တစ်ခါတစ်ရံတွင် cross pairs ဟုခေါ်သည်၊ ဤအတွဲများသည် USD နှင့် ကုန်သွယ်မှုမပြုသောကြောင့် ၎င်းတို့သည် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ချိန်တွင် ငွေဖြစ်လွယ်မှုနည်းပါသည်။
ထူးခြားဆန်းပြားသောအရာများ: တူရကီ (တူရကီ Lira)၊ တောင်အာဖရိက (တောင်အာဖရိက Rand) နှင့် ဘရာဇီး (ဘရာဇီးရီးရဲလ်) တို့ကဲ့သို့ ဖွံ့ဖြိုးဆဲ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ ငွေကြေးများနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် ထူးခြားဆန်းပြားသောအတွဲများကို အသေးစားအတွဲများအဖြစ် ရည်ညွှန်းနိုင်သည်။
အဆုံးစွန်သောအားဖြင့်၊ US Dollar သည် Forex trading space တွင်အလွန်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်နေသည်။ ထိုသို့သောအတွဲများသည် ငွေဖြစ်လွယ်မှုနှင့် မတည်ငြိမ်မှုအဆင့်နိမ့်ကျပြီး ပုံမှန်အားဖြင့် ပိုမိုတင်းကျပ်လာပါသည်။ န့်.
ဥပမာတစ်ခုဖြင့် Forex Trading ကိုလေ့လာပါ
Forex trading ၏ကျယ်ပြန့်သောအယူအဆသည်ငွေကြေးအတွဲတစ်ခု၏အနာဂတ် ဦး တည်ချက်ကိုမှန်းဆရန်ဖြစ်သည်။ သင်မှန်ကန်စွာခန့်မှန်းတွက်ချက်လျှင်သင်ငွေရှာသည်။ သင်မလုပ်လျှင် - ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပျက်သည်။
သင် GBP/EUR အရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေသည်ဟု ဆိုကြပါစို့။
အတွဲ၏ လက်ရှိစျေးနှုန်းမှာ 1.1760 ဖြစ်သည်။
GBP သည် EUR ထက် တန်ဖိုးတက်လာမည်ဟု သင်ထင်သောကြောင့် သင်သည် 'ဝယ်ယူမှု' ကို တင်ပါ။
နာရီအနည်းငယ်ကြာပြီးနောက် GBP/EUR သည် 1.2% တိုးလာသည်။
သင့်အမြတ်ငွေကို သင်ကျေနပ်သောကြောင့် 'ရောင်းရန်အမှာစာ' ကိုတင်ခြင်းဖြင့် ငွေသွင်းရန် ဆုံးဖြတ်ပါ။
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း GBP / EUR ၏စျေးနှုန်းသည်ခန့်မှန်းတွက်ချက်ခြင်းအားဖြင့်အမြတ်အစွန်း ၁.၂% ရရှိခဲ့သည် တိုးမြှင့်လာသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုသင်ထင်လျှင်, သင် '' ရောင်းရန်အမိန့် '' ထားရန်လိုအပ်လိမ့်မယ်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ အွန်လိုင်း Forex Trading မြင်ကွင်း၏လှပမှုသည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်လောင်းကြေးကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အထက်ပါကုန်သွယ်မှုတွင်သင်ဒေါ်လာ ၅၀၀ လောင်းခဲ့လျှင်အမြတ်အစွန်း ၆ ဒေါ်လာရလိမ့်မည်။ မင်းကဒေါ်လာ ၅၀၀၀ လောင်းမယ်ဆိုရင်မင်းရဲ့အမြတ်ကဒေါ်လာ ၆၀ ဖြစ်မယ်။
Forex Trading: The Spread ကိုလေ့လာပါ
တစ်ခုတည်းစျေးကွက်တစ်ခုရှိပါတယ် ပျံ့နှံ့ ဖော်ပြချက်အချို့နှင့် Forex သည်ကွဲပြားခြားနားသည်။ မသိသေးသူများအတွက်၊ အတိုးနှုန်းသည် တောင်းဆိုသည့်စျေးနှုန်း (မည်မျှရောင်းမည်) နှင့် လေလံစျေးနှုန်း (သင်မည်မျှဝယ်မည်) အကြား ကွာခြားချက်ဖြစ်သည်။ ဥပမာ - ၀ ယ်ဈေးသည် ၂.၃၁၀၀ နှင့်ရောင်းဈေး ၂.၃၁၀၆ ဖြစ်ပါကဤနေရာတွင်ပျံ့နှံ့မှုသည် ၆ ဖြစ်သည် pips.
သင် ၀ ယ်လိုအားအလွန်မြင့်မားသော (ဥပမာအမေရိကန်ဒေါ်လာ) ရှိသောအခြေခံငွေကြေးကိုအသုံးပြုနေပါက (ထိုငွေပေးငွေယူပေါ်ရှိ) Forex spread သည်များသောအားဖြင့်အသုံးနည်းသောငွေကြေးထက်သေးငယ်လိမ့်မည်ကိုသင်တွေ့ရှိလိမ့်မည်။
ဤသည်ရောင်းလိုအားနှင့်ဝယ်လိုအား၏ဂန္အမှုဖြစ်ပါတယ်။ ဤဥပမာတွင်ပွဲစားသည်သင့်အားပိုမိုမြင့်မားသော ၀ င်ငွေကိုအားသွင်းစရာမလိုသည်ကိုသတိရပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့သည်သူတို့ယခု ၀ ယ်ခဲ့သော (ဤဥပမာတွင်) ရောင်းရငွေတွင်မည်သည့်ပြproblemsနာမျှမဖြစ်သင့်ပါ။
၀ ယ်လိုအားနိမ့်ကျသည့်ငွေကြေးများကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဝယ်ယူခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်သင်၏အကောင်းဆုံးကြိုးစားပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ပိုမိုမြင့်မားသောပျံ့နှံ့မှုကြောင့်၎င်းသည်သင့်အားအမြဲတမ်းသင့်ကိုပိုမိုပေးဆပ်ရလိမ့်မည်။ ယေဘူယျအားဖြင့်ပြောရရင်ငွေကြေးပိုထူးခြားမှု (ပိုကောင်းတဲ့စကားလုံးလိုချင်မှုအတွက်) ငွေကြေးပိုများလေလေ၊ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူငွေကြေးပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုလေလေФорексပြန့်လေလေဖြစ်သည်။
အတွေ့အကြုံရှိ Forex ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်တစ်ခါတစ်ရံတွင် ၇- ယောက်သောငွေကြေးယူနစ်များကိုရောင်းဝယ်ကြလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် အကယ်၍ ပြန့်ပွားမှုသည် .7 (တစ်နည်းပြောလျှင် ၅ အထိ) ဖြစ်ပါကသင်မည်သည့်ငွေကြေးရောင်းဝယ်မှုကိုမဆိုယူနစ် ၅၀၀ ကုန်ကျနိုင်သည်။
ကုန်သွယ်ရေး suite ကို Tools များ
Forex ပွဲစားတိုင်းတွင်ကုန်သွယ်ရေးကိရိယာများရှိလိမ့်မည်။ ၎င်းတို့ကိုစင်မြင့်၏ 'ကုန်သွယ်ရေးအစုံ' တွင်တွေ့နိုင်သည်။ များသောအားဖြင့် Forex ကုန်သည်များသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုများပြုလုပ်ရန်နည်းပညာဆိုင်ရာညွှန်းကိန်းများ၊
MACD: 'ရွေ့လျားပျှမ်းမျှ convergence မတူကွဲပြားခြင်း' ဟုအဓိပ္ပာယ်ရသောဤကိရိယာသည်ရွေ့လျားသည့်ပျမ်းမျှအပေါ် အခြေခံ၍ ခေတ်ရေစီးကြောင်းအသစ်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိလိမ့်မည်။ ခေတ်ရေစီးကြောင်းသည်ငွေကို Forex တွင်တည်ရှိသည်။
Bollinger ကြိုးများ: ဤနည်းပညာဆိုင်ရာညွှန်ကိန်းသည်သင့်အားလမ်းကြောင်းတစ်ခုသွားမည့်လမ်းကြောင်းကိုရှာဖွေရာတွင်အထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။ တစ်ခုကညွှန်ပြချက်တစ်ခုပိုင်ဆိုင်မှုစျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုန်းကျင်လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖျောပွပါလိမ့်မယ်။ လိုင်းများသည်ရွေ့လျားပျှမ်းမျှနှင့်ပုံမှန်ကွာခြားချက်များကိုနှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။
ADX (ပျမ်းမျှ directional အညွှန်းကိန်း): လမ်းကြောင်းတစ်ခုဘယ်လောက်ခိုင်မာသည်ကိုသိရှိရန် ADX ကိုသုံးနိုင်သည်။ Trends သည်အမြဲတမ်းအပေါ်သို့မဟုတ်အောက်သို့ကျလိမ့်မည်။ အနုတ်လက္ခဏာ directional အညွှန်းကို -DI အဖြစ်ပြလိမ့်မည်။ အပေါင်းသည် + DI ဖြစ်သည်။
RSI (ဆွေမျိုးအင်အားညွှန်းကိန်း): ဒီအရှိန်အဟုန်လှိုသည်စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုအပြောင်းအလဲအပြင်စတော့စျေးနှုန်းမြင့်တက်မှုနဲ့ကျဆင်းမှုနှုန်းကိုတိုင်းတာလိမ့်မယ်။
Ichimoku တိမ် Ichimoku Kinki Hyo အဖြစ် ရည်ညွှန်းလေ့ရှိသည်၊ ဤတစ်ခုသည် ကုန်သွယ်မှုအချက်ပြမှုများ၊ လမ်းကြောင်းသစ်ဦးတည်ချက်အချက်အလက်၊ အရှိန်အဟုန်ကို အကဲဖြတ်ရန်၊ ခုခံမှုနှင့် ပံ့ပိုးမှုနှစ်ခုစလုံးကို ပေးဆောင်သည့် ဘက်စုံအညွှန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်ချက်ကြည့်လိုက်လျှင် ခေတ်ရေစီးကြောင်းများအကြောင်း ထိုးထွင်းသိမြင်မှုအချို့နှင့် ၎င်းအတွင်းရှိ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော အချက်ပြမှုများလည်း ရရှိနိုင်သည်။
Stochastic ဤသည်အရှိန်အဟုန်လှို ဦး တည်ချက်အတွက်ဆက်လက်မျှော်မှန်းနိုင်ရန်အတွက်, Forex pair တစုံစျေးနှုန်း၏သမိုင်းကိုကြည့်, ကောင်းတစ် ဦး ညွှန်ပြဝယ်နှင့်ရောင်းညွှန်ကိန်းဖြစ်ပါတယ်။
SAR (Parabolic ရပ်တန့်ခြင်းနှင့်ပြောင်းပြန်) သင်သည်မည်သည့်နေရာတွင်ရပ်နားရန်အမိန့်ကိုချရမည်ကိုဆုံးဖြတ်ရာတွင်ကူညီပေးသောကာလတိုစျေးနှုန်းများကိုပြောင်းပြန်ဖြစ်စေသည့်အချက်များကိုအာရုံစိုက်သည်။
Forex Trading ကိုလေ့လာပါ- ကုန်သွယ်မှုပလပ်ဖောင်းများ
Forex ဈေးကွက်တွင်အထူးပြုသည့် MetaTrader4 (MT4) ပလက်ဖောင်းသည်အဆင့်မြင့်ကုန်သွယ်မှုကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေနိုင်သည်။ ၎င်းသည်နည်းပညာဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုများစွာ (စျေးနှုန်းများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း) နှင့်ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာစက်ရုပ်များနှင့်အပြည့်အဝကိုက်ညီသောအဆင့်မြင့်ကုန်သွယ်မှုကိုလွယ်ကူစေသည်။
တွဲဖက် တွဲဖက် MetaTrader5(MT5) သည် သင့်အား Forex ကုန်သွယ်မှု စျေးကွက်များတွင် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်မှု ဆောင်ရွက်မှုများနှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုများကို လုပ်ဆောင်နိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။ MT5 သည် ၎င်း၏ကုန်သည်များကို စတော့ရှယ်ယာများ၊ အနာဂတ်များနှင့် CFDs များထံဝင်ရောက်ခွင့်ပေးရန် ကနဦးဖန်တီးထားသည်။
ဘေးထွက်မှတ်စုတစ်ခုတွင် Forex နေရာနှင့်မတူသည်မှာ၊ CFD ကုန်သွယ် သင်၌ရှိကောင်းရှိနိုင်သောမည်သည့်နောက်ခံပိုင်ဆိုင်မှုကိုမဆို ၀ ယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ရောင်းချခြင်းမပါဝင်ပါ။
Forex trading တွင်သြဇာရှိခြင်း၏အခြေခံနိယာမမှာသင့်အကောင့်ထဲရှိလက်ရှိငွေထက်များသောငွေပမာဏကိုသင်ရောင်းဝယ်ရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏ဆုံးရှုံးမှုများအပြင်အရောင်းအ ၀ ယ်များကိုအရှိန်မြှင့်နိုင်သည်ကိုသတိပြုသင့်သည်။
ဒါဆိုခင်ဗျားမှာလက်ကျန်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ရှိတယ်ဆိုပါစို့။ ၁၀ ဆလီဗာကိုသုံးတဲ့အခါဒေါ်လာ ၁၀,၀၀၀ နဲ့ကုန်သွယ်နိုင်လိမ့်မယ်။
အော်ဒါတင်ချင်တယ်လို့ ဆိုကြပါစို့ GBP / အမေရိကန်ဒေါ်လာ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သင်သည် ဗြိတိန်ပေါင်ပေါ်တွင် တင်းမာနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
အတွဲ၏ လက်ရှိစျေးနှုန်းမှာ 1.2623 ဖြစ်သည်။
သင့် Forex အရောင်းအ၀ယ်အကောင့်တွင် $500 ရှိပြီး၊ ထို့နောက် 20x Leverage ကို သင်လျှောက်ထားပါ။
သင်၏ 'အမှာစာ' သည် ယခု $10,000 ($500 x 20) တန်ဖိုးရှိသည်။
နာရီအနည်းငယ်အကြာတွင် GBP / USD ၏စျေးနှုန်းသည် ၂% အထိမြင့်တက်သွားသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်သင်၏အကျိုးအမြတ်ကိုပိတ်ဆို့ပြီးရာထူးမှထွက်ရန်ဆုံးဖြတ်သည်။
ပုံမှန်အခြေအနေတွင်ဒေါ်လာ ၅၀၀ လောင်းကြေး၏ ၂% သည်ဒေါ်လာ ၁၀ အမြတ်ရရှိလိမ့်မည်။
သို့သော်၊ သင်၏ကုန်သွယ်မှုတွင် 20x အသုံးချနိုင်သောကြောင့်၊ ၎င်းသည် သင်သည် အမှန်တကယ် $200 ($10.00 x 20) ကို ရရှိခဲ့သည်ဟု ဆိုလိုသည်။
ပွဲစားတစ် ဦး ရွေးချယ်ခြင်း၏အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းသည်သင်၏ဆုံးဖြတ်ချက်မချမီသိသိသာသာသုတေသနလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဤသို့ပြုလုပ်ရန်နည်းလမ်းများမှာပွဲစားပလက်ဖောင်းပေါ်ရှိပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုဖတ်ခြင်း၊ သင့်အားအခြားပွဲစားများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ပွဲစား site နှင့်ပတ်သက်သည့်အတွေ့အကြုံများကိုသင့်အားထိုးထွင်းသိမြင်ရန်ဖြစ်သည်။ သင်လည်းစစ်ဆေးနိုင်သည် ပွဲစားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း ငါတို့ကဲ့သို့ပင်ဘက်မလိုက်ဘဲကျွမ်းကျင်သူများပြုလုပ်သောသုတေသနအပေါ်အခြေခံသည်။ နောက်ပိုင်းတွင်ထိုအကြောင်းပိုမို။
Forex Trading Provider ကိုရွေးချယ်ခြင်း - ဘာကိုစဉ်းစားရမလဲ
အပြိုင်အဆိုင်များသောအပြိုင်အဆိုင် Forex ပွဲစားဈေးကွက်တွင်ရွေးချယ်ရန်ရွေးချယ်ထားသောပလက်ဖောင်းရာပေါင်းများစွာရှိသည်ကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။ များစွာသောသူတို့သည်ယူကေကုန်သည်များသည် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။
Forex Trading ကို လေ့လာပါ- ဥပဒေပြုရေးနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း
စတင်ရန်နေရာကောင်းတစ်ခုမှာသင်စဉ်းစားနေသောပွဲစားသည်ဗြိတိန်ကုန်သည်များအားတရားဝင် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်ကိုစစ်ဆေးရန်ဖြစ်သည်။ ပွဲစားများအတွက်မသင်မနေရ based ယူကေမှာ ရှိဖို FCA (Financial Conduct Authority) ကုန်သွယ်မှုလိုင်စင်။
ပွဲစားကို FCA မှလိုင်စင်ချထားပါကယူကေနှင့်အီးယူဥပဒေများအရပလက်ဖောင်းသည်၎င်း၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်နေသည်ကိုသင်သိနိုင်သည်။
ထိုသို့ပြောခြင်းဖြင့်၊ အကာအကွယ်များနှင့် စည်းမျဉ်းဆိုင်ရာ အကာအကွယ်များစွာကို ပေးဆောင်သည့် အာကာသထဲတွင် FCA မဟုတ်သော Forex ပွဲစားများ အများအပြားရှိသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းတို့ကဲ့သို့သော အခြားအဆင့်တစ်အဖွဲ့များမှ လိုင်စင်ရယူရန် ရွေးချယ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ CySEC (ဆိုက်ပရပ်စ်) နှင့် ASIC (Australiaစတြေးလျ) ။
ယခုအချိန်တွင်အွန်လိုင်း Forex ပွဲစားများသည်အသားအရောင်ခွဲခြားရန်ပုံငွေများကိုပုံမှန်ဖြစ်အောင်လုပ်ရန်သေချာသည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ပွဲစားပလက်ဖောင်းကိုရွေးချယ်သည့်အခါ၎င်းသည်သင်သတိပြုရန်လိုပေမည်။
ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင်သင်၏ forex ပွဲစားသည်သီးခြားရန်ပုံငွေများကိုကမ်းလှမ်းပါကဆိုလိုသည်မှာသင်၏ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာအရင်းအနှီးသည်သင်၏ပွဲစားသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအတွက်အသုံးပြုသောရန်ပုံငွေများမှလုံခြုံစွာအကာအကွယ်ပေးလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်။
ပွဲစားများ၏စည်းမျဉ်းများကိုအမြဲတမ်းစစ်ဆေးပါ။ ပလက်ဖောင်းများသည် ၄ ​​င်းတို့လည်ပတ်ပုံနှင့်ဒေဝါလီခံခြင်းကိစ္စများတွင်ကွဲပြားလိမ့်မည်။ သင်၏ရန်ပုံငွေများကို ၁၀၀% အကာအကွယ်ပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
သင်၏ Forex ပွဲစားစာရင်းသို့ငွေသွင်းခြင်းသို့မဟုတ်သင်၏အမြတ်အစွန်းများရုတ်သိမ်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်သင်၏အတွေ့အကြုံသည်မြန်ဆန်ရိုးရှင်းပြီးပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသင့်သည်။
ပလက်ဖောင်းများစွာသည်သင်၏ငွေသွင်းခြင်းကိုချက်ချင်းလုပ်ဆောင်လိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းသင်၏ပွဲစား (သို့) ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းသည်နည်းနည်းကြာမည်မဟုတ်ကြောင်းနှစ်ကြိမ်စစ်ဆေးရန်ကောင်းသည်။
အချို့ပွဲစားများကသင့်အားမလှုပ်မရှားအခကြေးငွေပေးမည်ကိုသတိပြုပါ။ ၎င်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်အနည်းဆုံးပေါင် / ဒေါ်လာ / ယူရိုကဲ့သို့သေးငယ်သည့်ငွေပေးချေမှုတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်ပူးတွဲပါစည်းကမ်းချက်များကိုအမြဲဖတ်ပါ။
ရရှိနိုင်သော အသုံးအများဆုံး ငွေပေးချေမှု/အပ်ငွေ ရွေးချယ်မှုအချို့တွင် ပါဝင်သည်; Visa၊ Mastercard၊ အီး-ပိုက်ဆံအိတ်များ (ဥပမာ PayPal က) American Express နှင့် ဘဏ်ငွေလွှဲခြင်း။
Forex Trading ကိုလေ့လာပါ- ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု/ပံ့ပိုးကူညီမှု
ဖောက်သည်များ၏ပံ့ပိုးမှုသည်မည်သည့်ကုမ္ပဏီနှင့်မဆိုကောင်းသောအတွေ့အကြုံရှိခြင်း၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ Forex ပွဲစားများသည်များစွာသောဖောက်သည်အထောက်အကူပြုဝန်ဆောင်မှုကိုပေးသော်လည်းနောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်မချမီသုတေသနအချို့ပြုလုပ်ရန်အကြံပြုလိုသည်။
ဖောက်သည်ထောက်ခံမှုရွေးချယ်မှုကွဲပြားလိမ့်မယ်ဒါပေမယ့်ရွေးချယ်စရာများသောအားဖြင့်ပါဝင်သည်; တိုက်ရိုက်ချက်တင်၊ အီးမေး၊ တယ်လီဖုန်း၊ ပလက်ဖောင်းတော်တော်များများသည်သင့်မှာပြorနာတွေ၊ မေးခွန်းတွေရှိရင် ၂၄ နာရီအကူအညီပေးတယ်။
ဤသည်မှာမိမိကိုယ်ကိုရှင်းပြသော်လည်း Forex အကျိုးဆောင်ခသည်အတော်အတန်ကွဲပြားနိုင်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ fပုံမှန်အားဖြင့်ကုန်သွယ်ရေးကော်မရှင်အနေဖြင့်လာသည် - သင်၏ရှယ်ယာဖြင့်မြှောက်ထားသည့်ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်ဆိုပါစို့၊ Forex trading site သည် ၀.၂% ကျသင့်မှာဖြစ်ပြီးသင်၏အမှာစာသည်ဒေါ်လာ ၃၀၀၀ ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ကော်မရှင် ၆ ဒေါ်လာပေးရမည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်အမှာစာတန်ဖိုးဒေါ်လာ ၃,၅၀၀ ဖြစ်သည့်အခါသင်၏ရာထူးကိုပိတ်လိုက်ပါကသင်၏ကော်မရှင်သည်ဒေါ်လာ ၇ ဒေါ်လာဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့အစောပိုင်းကဆွေးနွေးခဲ့သည့်အတိုင်း၊ သင်ရွေးချယ်ထားသောပွဲစားသည်ပြန့်ပွားမှုနည်းသည်ကိုသေချာစေရန်သင်လိုအပ်သည်။ ဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း။ EUR / USD ကဲ့သို့သောအဓိကအတွဲများ၌ ၁ အောက်အောက်ပြန့်နှံ့မှုကိုကမ်းလှမ်းသော Forex trading sites များအတွက်ရည်ရွယ်သည်။ ဤစည်းမျဉ်းမှတစ်ခုတည်းသောခြွင်းချက်မှာသင်သည်ကော်မရှင်မလိုသောပွဲစားတစ် ဦး ကိုအသုံးပြုနေသည်ဆိုပါကသဘာဝကျကျပြန့်ပွားမှုနှုန်းသည်အနည်းငယ်ပိုမိုမြင့်မားကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။
အကွိမျမြားစှာ forex အားလုံးအတွက်: တနည်းကား၊ ရွေးစရာများများလေ - အထူးသဖြင့်ကုန်သွယ်ရေးကိရိယာများနှင့်သက်ဆိုင်သောအခါ။ အချို့ပွဲစားများသည်အတွဲအနည်းငယ်ရှိနိုင်သော်လည်းအခြားသူများက ၁၀၀ ပိုလျှံနိုင်သည်။ သင်လက်မှတ်မထိုးမီစစ်ဆေးနိုင်သည်။
နည်းပညာဆိုင်ရာညွှန်ကိန်းအမျိုးမျိုး ၎င်းတို့ပေးဆောင်ထားသော ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကြောင့် ဤစာရင်းဇယားများနှင့် ထပ်ဆင့်မှုများသည် သင့်အား ပိုမိုကောင်းမွန်သော ကုန်သွယ်မှုဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ရာတွင် ကူညီပေးပါလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်၊ သင်ရွေးချယ်ထားသော ပွဲစားသည် နည်းပညာဆိုင်ရာ အညွှန်းကိန်းများနှင့် အဆင့်မြင့်ဇယားဖတ်ခြင်းကိရိယာများကို အစုအဝေးပေးကြောင်း သေချာပါစေ။
နောက်ဆုံးတွင်၊ သင်မ ၀ င်ခင်စည်းကမ်းချက်များ၊ အခကြေးငွေများ၊ စာရင်းများနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များကိုအမြဲတမ်းစစ်ဆေးရန်အကြံပြုလိုပါသည်။
၂၀၂၀ တွင် Forex Trading ကိုလေ့လာရန်အကောင်းဆုံးပွဲစားများ
သင်ရုံ၏လောကီသားတို့သည်အထဲကစတင်နေတယ်ဆိုရင် အွန်လိုင်းကုန်သွယ်ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်တဲ့ပွဲစားကိုသုံးဖို့အရေးကြီးတယ်။ အထက်ဖော်ပြပါမက်ထရစ်များအားလုံးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း - အောက်တွင်သင်လေ့လာသင်ယူရန် ၂၀၂၁ တွင်အကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းပွဲစားများစာရင်းကိုသင်တွေ့ရှိလိမ့်မည် Forex ကုန်သွယ်.
(၄) AVATrade - Tight Spreads နှင့်အတူ Forex ပွဲစားကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်
ဤပွဲစားသည် ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးတိုက်ကြီးလေးခုတွင်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားပြီးသင်ပိုမိုစုံလင်စေရန်စီစဉ်ထားပါကကုန်သည်များအားငွေကြေးအတွဲ ၅၀ ကျော်၊
ဤပွဲစားများနှင့်ရရှိနိုင်သည့်ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းအချို့သည် MT4, MT5 နှင့်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် web trading software တို့ဖြစ်သည်။ AVAtrade သည်အရောင်းအဝယ်အမျိုးမျိုးနှင့် forex တွင် ၄၀၀ မှ ၁ အထိထိမြှင့်တင်ခြင်းနှင့် ၀.၈ pips အထိယှဉ်ပြိုင်နိုင်ခြင်းစသည့်အမျိုးမျိုးသောကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာရွေးချယ်စရာများနှင့်အထောက်အကူဖြစ်စေသောအင်္ဂါရပ်များကိုပေးသည်။
ပွဲစားများသည် stop-loss နှင့် take-profit orders များကဲ့သို့သောစွန့်စားရမှုစီမံခန့်ခွဲမှုအင်္ဂါရပ်များကိုလည်းကမ်းလှမ်းထားသည်။
Forex Trading - မည်သို့စတင်ရမည်ကိုလေ့လာပါ
ဒါကြောင့်သင်စိတ်ဝင်စားတဲ့ Forex အကျိုးဆောင်တစ်ယောက်ကိုသင်ရွေးထားပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဘယ်ကစရမလဲမသိဘူး? သင့်ကိုမိနစ်ပိုင်းအတွင်းအရောင်းအ ၀ ယ်ဖြစ်စေရန်ရိုးရှင်းသောအဆင့်ဆင့်လမ်းညွှန်ချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပြုစုပြီးပါပြီ။
အဆင့် ၁ - အကောင့်တခုဖွင့်နည်း
သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောပလက်ဖောင်းတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီးသည်နှင့်၎င်းသည်၎င်း၏ဝဘ်စာမျက်နှာကို ဝင်ရောက်၍ သင်၏အကောင့်ဖွင့်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုစတင်နိုင်သည်။ အကောင့်အသစ်များ (သို့) သင်စာရင်းသွင်းရန်လိုအပ်သည့်အရာများကဲ့သို့ပင်ဘောလုံးကိုလှိမ့်ရန်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်အချို့ကိုထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်။
ဒီအပိုင်းကတော်တော်လေးကိုစံထားတယ်၊ သင်၏အမည်အပြည့်အစုံ၊ မွေးသက္ကရာဇ်၊ ဆက်သွယ်ရမည့်အသေးစိတ်အချက်အလက် (များသောအားဖြင့်မိုဘိုင်းနံပါတ်နှင့်အီးမေးလ်)၊ လူနေအိမ်လိပ်စာနှင့်ဤကိစ္စတွင်သင်၏အခွန်အခြေအနေထည့်သွင်းရန်အမြဲလိုအပ်လိမ့်မည်။
ယေဘူယျအားဖြင့်ပြောရမည်ဆိုလျှင်သင်လိုအပ်သောဘဏ္informationာရေးအချက်အလက်သည်သင်၏အသားတင်ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ပုံမှန်ဝင်ငွေနှင့်သင်၏အလုပ်အကိုင်အခြေအနေဖြစ်သည်။ Forex ပွဲစားသည်သင်၏ငွေရေးကြေးရေးအကောင့်သာမကသင်၏ဘဏ္situationာရေးအခြေအနေနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သောမှန်ကန်သောထုတ်ကုန်များကိုပေးရန်ဤအချက်အလက်လိုအပ်လိမ့်မည်။
အဆင့် ၂: ယခင်ကုန်သွယ်မှုအတွေ့အကြုံ
ဤတွင်သင်သည်သင်၏ယခင်ကုန်သွယ်အတွေ့အကြုံအပေါ်အခြေခံပြီး, အချို့သောမေးခွန်းများ (များသောအားဖြင့်ရွေးချယ်မှုအများအပြား) ဖြေဆိုရန်ရှိသည်သွားကြသည်။
အမှန်ကတော့, စည်းမျဉ်းသတ်မှတ် Forex ပွဲစားများသင်ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာသင်သေချာစေရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ Forex အရောင်းအဝယ်သည်အလွန်အဆင့်မြင့်သောဘဏ္instrumentsာရေးဆိုင်ရာကိရိယာများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားခြင်း ဖြစ်၍ ဤကုန်သွယ်မှုနယ်ပယ်တွင်အတွေ့အကြုံအချို့ရှိခြင်းသည်အတော်လေးအရေးကြီးသည်။
အဆင့် 3: အထောက်အထားစိစစ်အတည်ပြု - KYC
နောက်ပြီး၊ မင်းဟာမင်းဟာမင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာမင်းသက်သေပြဖို့လိုလိမ့်မယ်။ KYC ဟုခေါ်လေ့ရှိသည် (သို့) သင်၏ဝယ်သူကိုသိပါကသင်၏မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုခြင်းသည်မည်သည့်ပွဲစားကိုမဆိုစာရင်းသွင်းရန်လုံးဝမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
ပွဲစားများသည်များသောအားဖြင့်သင်၏မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြရာတွင်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးထားသောစာရွက်စာတမ်းမိတ္တူများကိုတောင်းလိမ့်မည်။ ဒေသဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများပေါ် မူတည်၍ အချို့ပွဲစားများသည်သင်၏မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းဗီဒီယိုဖြင့်အမှန်တကယ်အတည်ပြုလိမ့်မည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကာမူ၊ သင်၌နိုင်ငံကူးလက်မှတ်သို့မဟုတ်နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်အဆင်သင့်ရှိမရှိသေချာအောင်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
ဗွီဒီယိုစစ်ဆေးမှုအမှု၌သင်၏မှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်းပြီးဆုံးချိန်တွင်ပြင်ပမှအပြည့်အဝစစ်ဆေးပြီးသောပံ့ပိုးသူ (& EBH partner) ကဗီဒီယိုကိုအတည်ပြုသည့်ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်လုပ်ဆောင်လိမ့်မည်။ ဗွီဒီယိုစစ်ဆေးခြင်းသည်အော်ပရေတာတစ်လုံးလိုအပ်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ပုံမှန်အားဖြင့်သာမန်စီးပွားရေးနာရီများရနိုင်သည့်အချိန်အကြာကြီးရှိသည်။
လိပ်စာအထောက်အထားသည် အများအားဖြင့် လက်ခံထားသော စာရွက်စာတမ်းများစာရင်းမှ စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုသာ လိုအပ်သည်။ အများအားဖြင့်၊ သင့်လိပ်စာကို အတည်ပြုသောအခါတွင် ဘဏ်ရှင်းတမ်းတစ်စောင် သို့မဟုတ် အသုံးဝင်မှုဘေလ် (လျှပ်စစ်၊ ရေ၊ ဓာတ်ငွေ့ သို့မဟုတ် ဖုန်းဘေလ်) မိတ္တူသည် လုံလောက်မည်ဖြစ်သည်။
သင်၏မှတ်ပုံတင်ကိုအတည်ပြုပြီးသည်နှင့်သင့်တွင်တရား ၀ င်အကောင့်တစ်ခုရှိပြီးသင်၏ငွေရင်းငွေရင်းအချို့ကိုသင်၏ Forex ပွဲစားသို့ထည့်ရန်ဖြစ်သည်။
KYC ပြုပြင်ချိန်သည်ကွဲပြားနိုင်သည်၊ သို့သော်သင်အတည်ပြုချက်ကိုကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းနေသည်ဟုခံစားရပါကပွဲစား၏ဖောက်သည်အထောက်အကူပြုအဖွဲ့နှင့်အမြဲဆက်သွယ်နိုင်သည်၊ သူတို့ကသင့်ကိုဤအတွက်လိုက်လံဖမ်းဆီးရန်ပျော်ရွှင်လိမ့်မည်။
သင်၏အမည်ကို Forex ပွဲစားမှအတည်ပြုပြီးသည်နှင့်သင်၏ငွေစာရင်းအချို့ကိုငွေသွင်းနိုင်သည်။
သင့်တွင်သင်အသုံးပြုရန်လိုအပ်သောငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းရှိပါကပွဲစားတစ် ဦး အနေဖြင့်၎င်းကဲ့သို့သောငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကိုလက်ခံသည်ကိုအမြဲစစ်ဆေးသင့်သည်။
သင်၏ရွေးချယ်မှုသည်ငွေသွင်း / ခရက်ဒစ်ကဒ်ဖြစ်ပါကသင်၏အပ်ငွေသည်သင်၏အကောင့်သို့ချက်ချင်းအသိအမှတ်ပြုခံရနိုင်သည်။ ဥပမာဘဏ်ငွေလွှဲပြောင်းခြင်းဖြင့်သင်၏အပ်ငွေကိုမရှင်းလင်းမီရက်အနည်းငယ်အကြာဖြစ်နိုင်သည်။
ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းအနည်းငယ်ကို အများအားဖြင့် လက်ခံသည်။ ဒက်ဘစ်/ခရက်ဒစ်ကတ်များ၊ ဘဏ်ငွေလွှဲမှုများနှင့် အီး-ပိုက်ဆံအိတ်များ။
သင်ကုန်သွယ်မှုမပြုမီ၊ ၎င်းသည်မည်သို့အလုပ်လုပ်ပုံနှင့်ရာထူးများကိုမည်သို့ ၀ င်ရန်နှင့်ထွက်ခွာရမည်ကိုအခြေခံကျကျနားလည်ထားရန်သေချာသည်။
သင်အမှန်တကယ်ငွေပေးငွေယူခြင်းမပြုမီသင်၏ပထမဆုံး Forex ကုန်သွယ်မှုအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာသရုပ်ပြအကောင့်တစ်ခုဖြင့်စတင်ခြင်းဖြစ်သည်။
ယခုသင်သည် Forex Order ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။
သင်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ထားသည့်အဆင့်ရောက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အမှတ်အသားကိုအတည်ပြုပြီးထိုငွေထဲတွင်ငွေအချို့ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်ရန်ပုံငွေများထပ်ထည့်သည်။ - ယခု၊ အစစ်အမှန်ငွေဖြင့်အရောင်းအဝယ်လုပ်ရန်အချိန်တန်ပြီ။ အလွန်သေးငယ်သောလောင်းကြေးများဖြင့်စတင်ရန်မှာကောင်းသောအကြံဖြစ်သည်။ နောင်တွင်နောင်တရကောင်းရနိုင်သည့်မည်သည့်ကြီးမားသောအန္တရာယ်များကိုမဆိုအရာအားလုံးမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုလှည့်စားခြင်းကအဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။
Forex Trading ကိုလေ့လာပါ- နိဂုံး
လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်း Forex တော်လှန်ရေးကြောင့်အနည်းငယ်သောကုန်သည်များအတွက်ငွေရေးကြေးရေးအရလွတ်လပ်သောလူနေမှုပုံစံကိုယခုရရှိနိုင်ပါပြီ။
ဒီလမ်းညွှန်ကိုဖတ်ပြီးနောက်သင် forex မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုအတွင်းပိုင်းစက်ပြင်များအကြောင်းပိုမိုကောင်းမွန်သောနားလည်မှုရှိမည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ ဤအသိပညာသည်သင်၏ကုန်သွယ်ရေးအလုပ်ကိုလက်ျာခြေထောက်ပေါ်၌ချခြင်းသေချာစေရန်ဖြစ်သည်။
Forex - တခါတရံတွင် FX ဟုရည်ညွှန်းပြီး 'နိုင်ငံခြားငွေလဲနှုန်း' ကိုဆိုလိုသည်။ ၎င်း၏အခြေခံအကျဆုံးပုံစံဖြစ်သော Forex သည်ငွေကြေးအတွဲများကို ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းခြင်းလုပ်ငန်းကိုအမြတ်အစွန်းရအောင်ပြန်လည်သုံးသပ်သည်
ကုန်သွယ်ရန်အကောင်းဆုံး Forex စုံကဘာလဲ။
ဒီအဖြေကိုအားလုံးကိုက်ညီမည့်အရွယ်အစားမရှိပါ၊ အားလုံးသည်ကိုယ်ပိုင်ကြိုက်နှစ်သက်မှုပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ထိုအရာများဖြင့်သင်စတင်ထွက်လာသောအခါအဓိကအတွဲများနှင့်တွဲဖက်ရန်အကောင်းဆုံးအကြံပေးသည်မှာ၎င်းတို့သည်အရွယ်မရောက်သေးသူများနှင့်ထူးခြားသောလက္ခဏာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်မတည်ငြိမ်မှုအဆင့်နည်းနည်းသာရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ငါ Forex အခမဲ့ကုန်သွယ်နိုင်သလား
အကယ်၍ သင်သည် Forex ကိုအခမဲ့ရောင်းလိုပါကသင့်အနေဖြင့်ယုံကြည်ရသောပွဲစားတစ်ယောက်နှင့်အတူ demo account တစ်ခုဖွင့်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ဤသည်ကသင့်အားသရုပ်ပြရန်ပုံငွေဖြင့်ကုန်သွယ်ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
Forex တွင် ၀ ယ်ယူရန်နှင့်ရောင်းချရန်မှာအဘယ်နည်း။
Forex အရောင်းအဝယ်လုပ်ရန်သင်ရွေးချယ်သောပွဲစားတွင် ၀ ယ်ရန်သို့မဟုတ်ရောင်းရန်အမှာစာလိုအပ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် ၀ ယ်ယူမှုအမိန့်ကိုပြုလုပ်ပါကငွေလဲနှုန်းသည်တက်သွားလိမ့်မည်ဟုသင်ဆိုလိုသည်။ ငွေလဲနှုန်းကကျလာမယ်လို့ထင်ရင်ရောင်းမှာပါ။
ငါ Forex ကုန်သွယ်နိုင်သည့်အနည်းဆုံးငွေပမာဏကဘာလဲ?
၎င်းသည်ပွဲစားမှပွဲစားနှင့်ကွဲပြားနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုမစတင်ခင်စစ်ဆေးပါ။ ကိစ္စအတော်များများတွင်သင်ငွေစာရင်းဖွင့်ရန်ဒေါ်လာ ၁၀၀ မှ ၂၀၀ ကြားကြားသွင်းရမည်။